बच्चाले जिउँदो सर्प निलेपछि… – Makalukhabar.com
यसकारण पहिलेजस्तो हुनेछैन आन्तरिक उडान
आईंपीएल : रोमाञ्चक सुपर ओभरमा दिल्लीको जित
बच्चाले जिउँदो सर्प निलेपछि…
मकालु खबर	 २०७७ भाद्र २१ गते प्रकाशित 39 0
एजेन्सी । भारतको उत्तर प्रदेशको बरेली जिल्लामा एक बच्चाले जिउँदाे सर्प निलेका छन् ।
खेल्ने क्रममा ती बच्चाले सर्पकाे बच्चा निल्नै लागेका थिए । तर आमाले बच्चाले केही खाइरहेकाे देखेपछि हत्तपत्त उक्त वस्तुलाई बाहिर निकालिन् । जब वस्तु बाहिर निकालिन्, उनि त्रसित भइन् ! बच्चाले सर्प निलेकाे थाहा पाएपछि उनले तत्काल अस्पताल पुर्याएकाे टाइम्स अफ इन्डियाले जनाएकाे छ ।
बच्चाका पिता धर्मपाल एक किसान हुन् । उनी आफ्ना एक वर्षका छोरा देभेन्द्र र ६ इन्च लामो मरेको सर्पको बच्चा लिएर अस्पताल पुगे । धर्मपालले इमर्जेन्सी स्वास्थ्य अधिकारी डा. हरिश चन्द्रलाई उनको छोराले सर्प निलेको जानकारी लिँदै मरेको सर्पको बच्चालाई टेबलमा राखिदिए ।
डाक्टरले तत्काल यो सूचना फिजिसियन डाक्टर एएम अग्रवाललाई जानकारी दिए । त्यसपछि बालकलाई इमर्जेन्सी वार्डमा भर्ना गरियो । डाक्टरका अनुसार त्यो सानो सर्प करेतको बच्चा हो, जुन असाध्यै विषालु हुन्छ । समयमै उपचार गरिएका कारणा अहिले बच्चा खतरामुक्त छन् ।
मकालु खबर 2365 खबरहरु0टिप्पणीहरू
यसरी बच्यो एलेक्सी नभाल्नीको ज्यान !
श्रीमान् छाेडेर रूखसँग बिवाह गरेकी महिलाले यसरी मनाइन् पहिलो वर्षगाँठ
श्रीमानले झगडा नगरेको भन्दै श्रीमतीले डिभाेर्स मागेपछि…
‘अब त्यो नर्कमा कहिल्यै फर्किन्नँ !’
महिलाको मुखभित्रबाट निकालियो चार फिट लामो सर्प, कसरी पस्याे ?